भुइकटहरको पनि अब बनिने भयो घर ,कति उठ्यो त सहयोग रकम ? आर्थिक विवरण यस्तो देखियो (भिडियो सहित ) – Complete Nepali News Portal
भुइकटहरको पनि अब बनिने भयो घर ,कति उठ्यो त सहयोग रकम ? आर्थिक विवरण यस्तो देखियो (भिडियो सहित )
Sisir Budhathoki August 24, 2018
अशोक दर्जीका मिल्ने साथी भुइकटरको पनि धेरै चर्चा छ । अशोक दर्जीका मिल्ने साथी भएकै कारण उनको चर्चा पनि धेरै माथि चुलिएको छ । अशोक दर्जीको भन्दा कम आर्थिक स्थिति भएका भुइकटरलाइ पनि अहिले धेरै दर्शक स्रोताहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । भुइकटहरको बस्नका लागी एउटा सामान्य घर पनि नभएकोले देश तथा विदेशबाट धेरै सहयोगीमनहरुले सहयोग गरिरहेका छन् ।भुइकटहरका बुबा र काका संग कुरा गर्दा उनीहरुले जग्गा किन्न जाँदाको घटना हामीलाई सुनाएका छन् । भुइकटरको लागि पनि देश विदेश बाट सहयोग रकम संकलन भैरहेको छ ।
आर्थिक ब्यबस्थापन समितिका संयोजक पूर्ण वाइबाले अहिले सम्म आएको आर्थिकको बारेमा हामीलाई जानकारी गराएका छन् ।
श्रीमतीले रक्सि धेरै खाएर अत्तिचार गरेपछि श्रीमानले सौता हाल्दिए, गाउँमा...